Honda Toyota များအတွက် Fodable စိတ်ကြိုက်အော်တိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလိပ်ကွန်တိန်နာ - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်ခြင်းသတ္တုသိုလှောင်ပစ္စည်းသတ္တုကွန်တိန်နာ,ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း,Pallet,ထိန်သိမ်း,roll ကွန်တိန်နာ etc
နေအိမ် » ကုန်ပစ္စည်း » ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းများနှင့် Roll ကွန်တိန်နာ » Honda Toyota များအတွက် Fodable စိတ်ကြိုက်အော်တိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလိပ်ကွန်တိန်နာ
Honda Toyota များအတွက် Fodable စိတ်ကြိုက်အော်တိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလိပ်ကွန်တိန်နာ
Metal storage box stacking4အလွှာ
loading စွမ်းရည် မိုးသည်းထန်စွာတာဝန် 1/1.5 tons load capacity
မေး: ငါs ကိုထုံးစံized ရရှိနိုင်?
မေး: သငျသညျဒီဇိုင်းကိုရေးဆွဲစေနိုင်သည် ?
မိုးလုံလေလုံကို C ပတ်ဝန်းကျင်တောင်းဆိုမှုကို, ခြောက်သွေ့စိုစွတ်သောမဟုတ်ဘူးအခြေအနေ, မဆိုတဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးဓာတုပစ္စည်းနှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ပါဘူး (ဇင့်ချထားတဲ့နှင့်အမှုန့် coated ထုတ်ကုန်များအတွက်, အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးပူသို့ကျဆင်းလာများအတွက်န့်အသတ်မရှိ,).
ရောင်းချရန်စက်မှုဇုန် trolley ကိုကိုင်တွယ် Roll- ကွန်တိန်နာ
Cutomized post nestable လိပ်ကွန်တိန်နာပေးသွင်း
အိတ်ဆောင် Logistic အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ Pallet Cargo သိုလှောင် Roll ကွန်တိန်နာ